musha More Formula One Drivers Bio Yuki Tsunoda Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Yuki Tsunoda Biography inokuunzira chokwadi nezve Hudiki hwake, Upenyu hwepakutanga, Kwaakabva Mhuri/mabviro, Vabereki vekuJapan, vanin'ina, uye musikana. Kunyanya zvakadaro, iyo Formula One yevatyairi Mararamiro, Hupenyu hweMunhu, Muhoro, uye mambure akakosha.
Nyaya refu ipfupi, tinokuunzira maonero akafara eHupenyu nhoroondo yaYuki Tsunoda, mutyairi wemujaho wekuJapan. Ari kumhanyirira Scuderia AlphaTauri muFormula One. Yedu Biography inotanga kubva pazuva rekuzvarwa kwake kusvika ave nemukurumbira.
Kuti uite nyota yeBiography yako, tinopa nzvimbo yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaYuki Tsunoda. Chokwadi, iyo foto yaunoona pano inopfupisa yake Yehudiki Nyaya uye Biography chokwadi.
Yuki Tsunoda Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva pahudiki hwake kusvika mukurumbira wake.
Hongu, wNdinoziva mutyairi wechiJapan nokuda kwemaitiro ake ekutyaira. Zvisinei nerukudzo, vanhu vashoma ndivo vakaverenga zvinyorwa zvipfupi zveYuki Tsunoda's Biography uye Nyaya Yehudiki..
Saizvozvo, tinokuunzirai nyaya inonakidza yaYuki Tsunoda uye mafambiro ebasa rake remujaho. Pasina kutambisa nguva ngatienderere mberi.
Yuki Tsunoda Childhood Story:
Nokuda kweBiography kutanga, Yuki Tsunoda akazvarwa musi we 11th waMay 2000. Akasvika pasi pano neChipiri chinofadza kuna baba naamai vake vechiJapan.
Mutyairi wedu weFormula one akaberekerwa muguta reKanagawa Prefecture, rinozivikanwa seSagamihara kuJapan. Zvakare, Yuki Tsunoda akazvarwa kubva kumubatanidzwa wababa vake naamai vake.
Kunyange zvakadaro, hazvina chokwadi kana ane vanun’una kana kuti vanun’una nehanzvadzi vangani vaainavo. Zvisinei, kuberekwa kwake kwakaunza mufaro mukuru uye gutsikano kumhuri yake.
Mufananidzo wekutanga waYuki Tsunoda.
Yuki Tsunoda akakurira pedyo neTokyo muKanagawa Prefecture. Rakanga riri taundi duku rinonzi Kamakura, muJapan. Kuda kwake kumhanya kwemotokari kwakatanga panguva yeUdiki hwake. Saizvozvo, Yuki Tsunoda akatanga karting ari mana.
Akawana kurudziro kubva pakuona baba vake vachikwikwidza. Baba vaYuki vakatora chikamu mumakwikwi emujaho emuJapan paNakai Inner Circuit.
Baba vaYuki Tsunoda vakapinda mumakwikwi e “Gymkhana” two-wheel racing. Kunze kwezvo, kusiyana nababa vake, akatanga kufarira mujaho wemavhiri mana.
Yuki Tsunoda akatora chikamu muKarting kubvira 4.
Kuti vaone kuti Yuki Tsunoda abudirira, baba vake vakatamba basa reMechanic wavo uye murairidzi. Akadzidzisa Yuki kubva muhupfumi hwezviitiko zvake zvemijaho.
Pakati pevamwe, baba vaYuki Tsunoda vakamudzidzisa kuti bhureki yakakosha sei pakupinda mukona. Kunze kwezvo, inogona kuita kuti mota itenderere.
Maererano nababa vake, kana iwe ukakwanisa kutenderera motokari kupfuura vamwe, unogona kushandisa throttle zvakare kare kupfuura vamwe. Yuki Tsunoda wechidiki achiri kushandisa hunyanzvi nanhasi.
Yuki Tsunoda uchitamba neshamwari yehudiki.
Yuki Tsunoda Family Background:
Kubva pakutanga, Yuki Tsunoda, baba, aive nesimba rakasimba rekuita basa remujaho. Saka aive Mechanic wemota yemujaho.
Kunyange zvazvo vakanga vasina kupfuma, taigona kuisa mhuri muboka somusha unoshanda nesimba, wapakati. Vaigona kukurumidza kupa zvinodiwa zvemba, kunyangwe mutengo wakakwira wekarting.
Yuki Tsunoda Family Origin:
Sezvambotaurwa, mudiki uyu akazvarirwa mukati uye chizvarwa cheSagamihara. Guta rinofukidza nzvimbo huru yekuchamhembe kwakadziva kumadokero kweKanagawa Prefecture, muJapan. Iyo inzvimbo yechitatu-ine vanhu vakawanda mudunhu, mushure meYokohama neKawasaki.
Sagamihara imusha kumhuri yeYokoyama, imwe yemapoka manomwe evarwi vedunhu reMusashi munguva yekutanga yeKamakura. Kunze kwezvo, inzvimbo yechishanu ine vanhu vakawanda yeGreater Tokyo Area. Mutauro wavo wechiJapani.
Zvakakodzera kucherechedzwa, zita rekuti Tsunoda nderechiJapan rinoreva "poindi kana kona." Zvakadaro, Yuki Tsunoda anotaurawo Chirungu parutivi kubva kuJapan.
Mukupedzisa Yuki Tsunoda Family Origin, tinoona achibva kuSagamihara. Nyika yake ndeyeJapan, uye ndewerudzi rweAsia. Inotevera inomiririra yedzinza remhuri yaYuki Tsunoda.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yaYuki Tsunoda.
Yuki Tsunoda Education:
Mujaho wekuJapan akapedza zvidzidzo zvake paLCA International Preschool muna Kurume 2007. Mushure mezvo, akaramba achienda kuLCA International Elementary School ndokuzopedza kudzidza kubva ipapo mu2013.
Makore matatu gare gare, akanyoresa kuNihon University Third High School. Pave paya, akatamira zvakare kuWako High School muna Kubvumbi 2017. Mushure mezvo, muna 2019, Yuki Tsunoda akabatana neFaculty of Sport Management yeNippon Sport Science University.
Yuki Tsunoda akapinda muLCA International Elementary School - akapedza kudzidza ipapo muna 2013.
Saizvozvo, asati aenda kuNihon, akanyoresa muHonda's Suzuka Circuits Sports nzvimbo muchikamu chepamusoro fomula. Akapedza kudzidza zvakanaka muna 2016.
Saka, kuve nhengo yeHonda Formula Dream Programme kwakatungamira kune yake-anogara mumwechete debut muF4 Japanese Championship.
Yuki Tsunoda Early Career:
Sagamihara-native akatanga basa rake rekarting reunyanzvi muna 2010. Akabatana neJAF Junior Karting Championship. Mushure mezvo, akazoenda kukirasi yedunhu muna 2013 uye kosi yenyika muna 2014.
Kunyange zvazvo Yuki akanga aita karting kubvira 4, zvakanga zvisiri kusvika gumi nenhanhatu kuti akaisa mukuedza kwaidiwa zvinodiwa. Mushure mekupedza chikoro cheHonda's Suzuka Circuit Racing School, akaenderera mberi kuenda kuJapan F4 Championship muna 2016.
Yuki Tsunoda (pakati), achipemberera kumwe kuhwina kwake kwekutanga pamazuva ake ekarting.
Tsunoda akaita zvakanaka mumijaho miviri, izvo zvakakwezva kutariswa kweaimbove mutyairi weF1, Satoru Nakajima, uyo akamukurudzira kuHonda. Akatora podium yake yekutanga nechinzvimbo chechipiri. Ipapo, akaguma ari wechina munhangemutange yechipiri.
Zvakadaro, aive achiri kufanirwa kuhwina F4 Championship, izvo zvaakaita muna 2018. Kuhwina kwacho kwaive kunongedza Kubudirira kwaYuki Tsunoda mubasa rake remujaho.
Yuki Tsunoda Biography – Mugwagwa Wemukurumbira:
Yuki Tsunoda paakahwina zita reF4, Honda yakaronga bvunzo yemazuva matatu neMotopark. Tsunoda aifanira kuita zvakanaka kana aizokwikwidza kuEurope.
Zvakanaka zvakakwana, Akafadza uye akakwezva kufarira kwaHelmut Marko. Helmut akabva agadzira imwe yevadiki veHonda mutsigiri weRed Bull panguva imwe chete. Ndizvo zvakaita kuti Yuki ave chikamu cheRed Bull Junior Team.
Sechikwata cheRed Bull Junior, Tsunoda akakwikwidzana neMotopark mumakwikwi eEuroformula Open.
Mushure mekupedza pechipiri panguva yemujaho wake wekutanga, Akabuda munzvimbo yechitatu muPau Grand Prix. Tsunoda akahwina mukombe wake wekutanga mumujaho wechipiri kuHockenheim, kuGermany.
Yuki Tsunoda Biography- Rise to Fame:
Mukutanga kwa2020, Honda akazivisa Tsunoda kuti aizobatana naCarlin kumujaho weFIA Formula 2 Championship.
Kutevera munguva pfupi yapfuura, akatora mahwina matatu, nzvimbo ina dzemapango uye manomwe podium. Yuki Tsunoda akapedza ari pechitatu mumakwikwi nemapoinzi mazana maviri.
Kupemberera mushure meFIA Formula 2 Championship.
Mukupera kwa2020, Red Bull yakamupa mukana wekutyaira Formula One mota kekutanga pazuva repachivande bvunzo kuImola kwaAlpha Tauri. Ona vhidhiyo pano.
Isu tinofungidzira kuti ari kutarisira kuzviitira zita munyika yeF1. Akatsiva Daniil Kvyat, mutyairi wemujaho wokuRussia. Mushure mezvo, akabatana Pierre Gasly nechikwata chemwaka wa2021.
Yuki Tsunoda akabuda seF1's best rookie kwemakore mushure me2021 Bahrain Grand Prix. Tsunoda akawana mhedzisiro yake yepamusoro yeFormula One paHungarian Grand Prix. Mafambiro ake aiyevedza akaita kuti munhu wese ataure. Ona clip apa.
Akatanga mujaho wechigumi nenhanhatu, akakwira kusvika pachinhanho chechinomwe pamutsetse wekupedzisira, uye akakwidziridzwa kusvika pachitanhatu mushure mekudzingwa kwaSebastian Vettel. Zvinofadza, AlphaTauri akachengeta Tsunoda naGasly 2022 mwaka.
Yuki Tsunoda Dating ndiani?
Formula 1 mutambo wepamusoro-soro une chirongwa chinoda. Asi, vatyairi vakawanda vakanga vachiri kuwana rudo. Nepo vamwe vatyairi vachifarira kuchengetedza hupenyu hwavo pachezvavo, vamwe vane zvakawanda zvinotora nevavanoda pasocial media nguva.
Yuki Tsunoda haatauri zvakawanda nezvehupenyu hwake. Kunyangwe tichigona kufunga kuti haana kuroora, Zvirinani kumirira kusvika tawana simbiso kubva kuna Yuki Tsunoda pachake.
Haana musikana. Mujaho weFormula 1 anotarisa pabasa rake. Yuki Tsunoda anoita seasiri kufarira hukama parizvino. Kunze kwezvo, hapana zvinyorwa kana runyerekupe rwekufambidzana.
Yuki Tsunoda Family Life:
Sezvambotaurwa, Yuki haafariri kutaura nezvemhuri yake kana kuti upenyu hwake hwepachivande paruzhinji. Nekudaro, isu tinoziva kuti nhengo dzeimba yake dzinotsigira zvakanyanya basa rake remujaho.
Saka, panguva ino muBiography yedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yemusha waYuki Tsunoda.
Zvimwe Pamusoro paYuki Tsunoda Parents – Baba:
Yuki akawana kurudziro yebasa remujaho kubva kuna baba vake. Baba Tsunoda vaive neshungu dzemujaho.
Zvakadai, akatora chikamu mumakwikwi emujaho e'Gymkhana'. Nokutevera baba vake kumijaho, Yuki akadzidziswa kuita zvemijaho.
Tsunoda paakatanga karting, baba vake vakatamba basa reMechanic wake uye murairidzi. Akatsiura Yuki nezve nzira yekuwedzera kukurumidza, pakati pevamwe. Baba vaYuki murume wokuJapan anoshanda nesimba uye anoda mhuri yake zvikuru.
About Yuki Tsunoda Parents – Amai:
Tsunoda haaikwanisa kuzviita pasina rudo rwakasimba nekuchengeta imba yake. Anogoverana hukama naamai vake, sezvakaita baba vake. Chisungo pakati pake nevabereki vake chakabatsira kuumba murume anonzi Yuki Tsunoda.
Kunyange zvazvo asina kumbotaura nezvemhuri yake, tinoziva kuti Yuki anoda amai vake chaizvo. Zvakanga zvakaoma, kutyaira kuenda nekubva kumakwikwi akawanda ekarting. Ndisingarevi kuona kuti aita zvakanaka muzvidzidzo zvake. Kunyange zvakadaro, amai vaYuki, nomurume wavo, vakanga vasinganeti.
About Yuki Tsunoda Sibling:
Mujaho weJapan F1 anga akangwara kusvika parizvino nezvemhuri yake. Saka, hazvizivikanwi kuti Yuki ane munun'una kana kuti nevanin'ina. Nekudaro, isu tinofungidzira kuti dai aive nevanin'ina, vaigonawo kutora chikamu mukumhanya. Vanogona kuzviita nehunyanzvi kana sebasa rekuzvivaraidza.
About Yuki Tsunoda Relatives:
Iyo Sagamihara-yakazvarwa Formula, mutyairi mumwechete, anofanirwa kuve nedzimwe hama. Yuki Tsunoda ane mitezo mishoma yemhuri kunze kwababa vake, amai, uye dzimwe nhengo dzemhuri yake yenyukireya.
Shasha yechidiki ine vana babamunini, vana tete nana sekuru. Zvisinei, pahama dzake dzose hapana kana mumwe chete wedu wataiziva.
Yuki Tsunoda Personal Life:
Mutambi wechidiki wechiJapan akakodzera uye anotora hutano hwake zvakanyanya. Semutyairi weF1, Yuki Tsunoda anoda kugara akasimba mupfungwa nemumuviri. Naizvozvo, anotevera kudya kwakasimba uye anoshanda kunze mujimini nevamwe vake vamhanyi. Anonakidzwa nekutandara neshamwari.
Yuki Tsunoda's best friend ndiMarino Sato. Vanga vari vese kubva paUdiki. Vese vari vaviri inyanzvi dzemijaho. Dzimwe shamwari ndevaanoshanda navo, saPierre Gasly uye Max Verstappen.
Yuki anoita kufungisisa uye Yoga yekubvisa kushushikana uye kuchengetedza kuenzanisa muhupenyu hwake. Tsunoda is very good at skipping. Anofarirawo kuenda kutasva mugwagwa, kukwira, snowboarding, uye bhora munguva yake yekusununguka.
Tsunoda anofarirawo kukwira mugwagwa, kukwira, kukwira chando, uye nhabvu panguva yake.
Chiratidzo chake chekuzvarwa ndiTaurus, izvo zvinoita kuti ave akasununguka, ane shungu, akasiyana-siyana, uye akachenjera. Maererano neJapan Zodiac, 2000 (gore rake rekuzvarwa) raive gore reDragon Kokeshi Doll. Vakazvarwa mugore rino vakanaka, vanopayona, uye vane simba.
Yuki Tsunoda ane verified Instagram account ine vateveri vanopfuura zviuru mazana matanhatu. Mukuwedzera, Orange ndiyo yaanofarira ruvara.
Yuki Tsunoda Lifestyle:
The Japanese Star mumhanyi anoshamisa. Kunyangwe zvazvo Yuki Tsunoda ari mumwe wezviso zvitsva paF1 grid, aunganidza mari yakati wandei. Kunyange zvazvo akaberekerwa uye akakurira muJapan, iye zvino anogara kuSwitzerland. Ona mufananidzo wekugara kwake kweSwitzerland pano.
Yuki Tsunoda Car Collections:
Tsunoda anogona kunge asiri pakati pevakapfuma F1 mujaho. Asi kurudziro dzake dzakasiyana dzakamuita kuti awane uye ave nezvinhu zvishoma zveumbozha. Akatenga mota dzakasiyana siyana asi anoita seanofarira mota dzeHonda. Heino collage yemota dzake.
A Collage of Yuki Tsunoda's automobiles.
Yuki Tsunoda ave nerwendo rwunoshamisa semutyairi wemujaho wemotorsport akanakisa. Naizvozvo, mambure ake anofungidzirwa, maererano neane mukurumbira mambure, angangoita 5 miriyoni. Kwaanowana mari anobva pakushanda kwenguva refu uye akazvipira kuita basa rake remujaho.
Chirevo chinoti mutyairi wechidiki wekuJapan anowana mari inosvika madhora 0.5 miriyoni muAlphaTauri, kusasanganisa mabhonasi ake uye zvibvumirano zvekusimbisa.
Huwandu hwakakwana hwerutsigiro hunowedzera mari yevatyairi veJapan vasina-track. Honda, Honda Mota uye Redbull vanonyanya kumutsigira. Ngowani dzaArai dzakamutsigira. Saka, anoshandisa ngowani dzavo mumakwikwi ake eF1.
Protex, kambani yeOEM yekuJapan, yakamutsigirawo. Kambani yeJapan yePlatz, inova kambani yezvigadzirwa zvemhuka, inewo chibvumirano naye panzvimbo.
Yuki Tsunoda Untold Facts:
Mutyairi weFormula One wekuJapan ari kukurumidza kuita mukurumbira muFormula 1. Ndiye ega rookie kuwana mapoinzi mukirasi ye2021 F1 inosanganisira Haas F1 Team tandem. Mick Schumacher uye Nikita Mazepin.
Tsunoda akapedza wechipfumbamwe mukutanga kwake F1 kuBahrain mumwaka wa2021. Chii chimwe nezvenyaya yedu yebiography? Pazasi pane zvishoma zvinokatyamadza zvimwe chokwadi nezveYuki Tsunoda.
Yuki Tsunoda Height:
Sezvineiwo, mutyairi weJapan, Yuki Tsunoda, angangoita 5 ft uye peya yemainji pakureba. Saka nekudaro, ndiye mupfupi F1 mutyairi. Saizvozvo, ndiye akasimba uye ane hutano mujaho wemotokari mutyairi.
Yuki Tsunoda Helmet Chokwadi:
Kusiyana nevamwe vamhanyi veF1, ngowani yaYuki Tsunoda inosanganisira mifananidzo yakagadzirwa nenyanzvi yekuJapan. Mufananidzo uri kuseri kwengowani. Patani yacho inomiririra Mwari weMhepo, yaaifunga kuti yakanaka nekuti kuderera kwakakosha uye kune chekuita nemhepo.
Yuki Tsunoda's Helmet pattern inomiririra Mwari weMhepo.
Muzhinji Tsunoda aive nengowani yakagadzirwa kuunza rombo rakanaka. Kunze kwaizvozvo, raive zvakare gore idzva. Nekudaro, iyo pateni kumusoro yakafemerwa naCharles Leclerc.
Ivo vese vanoshandisa mugadziri mumwechete, Adrien Paviot. Ngowani yaTsunoda ya2020 ine chiratidzo cheRed Bull nemureza weJapan pairi. Uyezve, mureza unoratidza mijaho yevateveri veJapan.
Yuki Tsunoda anotakura unyanzvi hwakakosha, zvichida Eiken Foundation yekuJapan English Test Level 2 uye TOEIC Bridge 132 points. Zvakare, muna 2010, akaremekedzwa seNew Tokyo NTC Cup Series Champion.
Zvekare, muna 2011, akaziviswa semukundi kuYamaha SL National Tournament. Tsunoda akawana ruremekedzo neToranasuke Takagi Award.
Uyezve, Yuki akava mubairo weBridgestone kuWorld Karting Championship FP Junior Challenge Kirasi 2nd muna 2012. Akagadzira podium diki munhoroondo paFIA-F4 Round 11 Suzuka round spot 2nd muna2016.
Yuki Tsunoda's Chitendero:
Kunyange zvazvo pasina ruzivo pamusoro pechitendero chake, mutyairi weStar F1 anogona kuva muteveri weBuddhism kana Shinto. Mhedziso yedu inobva muzvitendero zvikuru zviviri zvakatevedzwa munyika yake yaakaberekerwa, Japan.
Yuki Tsunoda Biography Summary:
Mutyairi weJapan F1 ane kumhanya kusingadaviriki zvichienzaniswa nemamwe maRed Bull zvigadzirwa se Daniel Ricciardo uye Max Verstappen. Kunonoka kwake braking uye overtake hunyanzvi kusvika parizvino hwamusiyanisa.
Zvichakadaro, Yuki anoti anoda kuramba aine chimiro ichocho muFormula 1 yake yose. Ane chivimbo chokuti vanhu vachafadzwa nazvo. Kunze kwezvo, anoda kuchinjika uye kudzidza kubva kune avo vaachange achityaira achipikisana navo.
Sezvineiwo, kuti uverenge pamusoro paYuki Tsunoda Biography uye Nyaya Yehudiki, tave neruzivo rwese zvaungada kuziva nezvake. Yake Networth, zera, kureba, uremu, Hukama, Vabereki, Vanin'ina (Vanun'una), hama uye kusimuka mukurumbira zvinounganidzwa mutafura iri pazasi.
Zita rizere: Yuki tsunoda
Zuva rekuzvarwa: 11 Chivabvu 2000
Nzvimbo yekuzvarirwa: Sagamihara, Kanagawa, Japan
Basa: Mutyairi wemujaho wechiJapan (formula one)
Nhamba yemotokari: 22
Matimu: Honda Formula Dream Project (2016-18), Red Bull Junior Team (2019-20), AlphaTauri (2021-)
F1 Debut: 2021
Dzidzo: LCA International Preschool, LCA International Elementary School, Nippon Sport Science University Faculty of Sports Management.
Vabereki: kukwira mugwagwa, kukwira, snowboarding, uye nhabvu
Hobbies: Yoga uye kufungisisa, kukwira mugwagwa, kukwira, snowboarding, uye nhabvu munguva yake yekuzorora.
kukwirira:	 5 ft 2 mu (1.59 m)
Net Worth: $5M (2021)
Mvumo: Red Bull, Honda, Honda Mota, Protex, Arai ngowani, Platz
Dzinza / Race: zvechiAsia
Social Media: yukitsunoda0511 (instagram) and yukitsunoda07 (twitter).
Sezvatinotenderedza Yuki Tsunoda's Biography uye Childhood Hupenyu Nyaya, ndinofungidzira iwe unogona kutora zvidzidzo zvishoma. Chero zvaawana kusvika parizvino pakanga pasina kukanganisa. Akaita nemaune uye nguva dzose nhamburiko yokukwira pamanera ebudiriro.
Kunyangwe paive padyo nababa vake, akacherekedza hunyanzvi hwese hwakadzidziswa nababa vake. Kunze kwekupa mazano, Yuki Tsunoda munhu anoshanda nesimba. Nzira yehupenyu hwake ihope dzechokwadi uye Chishuwo chaTsunoda ndechekuve shasha yeNyika.
Parizvino, akaita F1 yake yekutanga muna 2021 naAlphaTauri. Kubva ipapo akamhanya navo ka12. Akapedza wechitanhatu kuHungary GP, inova zvakare basa rake-yakakwira F6 kupera. Nyeredzi yekuJapan yawana mapoinzi gumi nemasere panguva ino.
Iye ari wechi13 paWorld Drivers 'Championship chinzvimbo. Nekuda kwezera rake mudiki achienzaniswa nevatyairi veF1, zvatakaona ingori muromo weiyo iceberg. Tinovimba unonyoresa kune zvimwe biography chokwadi chine kuverenga kunonakidza.